प्रधानमन्त्रीमाथि डा. भट्टराईको फेरि कटाक्ष : ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन गर्न कसले रोकेको ? Canada Nepal
क्यानाडानेपाल आश्विन ३० २०७७
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चाएको छ । केही दिन अघि गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा डा.भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको नौ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए ।
जसको अहिले सवाल जवाफ भइरहेको छ । शुक्रबार बिहान ६५ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले डा. भट्टराईको आरोप खण्डन गर्दै सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध लागिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिका साथ अगाडि बढेको छ । हुन त केही गैरजिम्मेवार तत्वहरु गैरजिम्मेवार तरिकाले बोलेर हिँडेको पनि मैले सुनेको छु । एउटा निर्णय नभएको, कार्यआरम्भ नभएको र त्यो हुन्छ हुँदैन, कसले गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने टुंगो नभएको कुरोमा पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु । त्यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति निराधार हुन् । अभिव्यत्ति एउटा कुरा हो । तर, हामी त्यस्तो गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी हुन सक्दैनौँ । देश र जनतालाई गलत सूचना दिएर, भ्रममा पारेर, भड्काएर, गलत बाटोमा लाग्ने हर्कत हामी गर्दैनौँ । हामी सत्य निष्ठा र जिम्मेवारीका साथ मात्र अगाडि बढ्छौँ ।’
डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको कडा जवाफ : गलत सूचना दिएर जनतालाई भड्काउने ?
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको सो जवाफ आएको केही घण्टामै डा. भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत जवाफ फर्काएका छन् । ठूलो भ्रष्टाचार प्रकणमाथि उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गर्न कसले रोकेको प्रश्न गर्दै उनले कुराले हैन काम गरेर देखाउन चुनौती दिए ।
उनले लेखेका छन्, ‘ प्रधानमन्त्री ओली को भ्रष्टाचारप्रति साँच्चै शुन्य सहनशीलता हो भने बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षा प्रेस, यति, ओम्नीलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गर्न कसले रोकेको हो त? कुराले हैन काम गरेर देखाउनोस्, नत्र ढाँटको कुरा खाई पत्याउनु...।’
आश्विन ३०, २०७७ शुक्रवार १२:२१:४२ बजे : प्रकाशित